Hordhaca kulanka xamaasada iyo xiisaha badan Man City vs Tottenham lugta Labaad ee Champions League – Walaal24 Newss
Ciyaaryahanka khadka dhexe Dele Alli ayaa loo magacaabay kooxda Tottenham ee lugta labaad ee wareega quarter-finalka Champions League, lakiin waxaa la qiimeyn doonaa ka hor inta uusan Spurs go’aan ka gaarin hadii uu la ciyaari doono Manchester City.
Alli ayaa jabiyay gacantiisa lugta hore ee isbuucii hore, lakiin waxa uu ku soo laabtay tababarka.
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee City Fernandinho ayaa tababarka ku qaatay ka dib markii uu seegay kulankii Axadii ay guusha ka gaareen Crystal Palace muruqa.
Sergio Aguero ayaa la nasiyay markii uu joogay Palace, lakiin waa uu taam yahay, inkastoo Oleksandr Zinchenko (muruqa) uu shaki ku jiro.
Spurs weeraryahankeeda Erik Lamela oo aan ciyaarin tan iyo kulankii lugta labaad ee wareega 16-ka ee Borussia Dortmund 5tii Maarso sababo la xiriira dhaawac muruqa ah, ayaa sidoo kale loo tababaray islamarkaana uu jeclaan lahaa in lagu qiimeeyo Isniinta tababaraha.
Iskaashatada Alli, maamulaha Mauricio Pochettino ayaa yiri: “Waxaan u baahanahay inaan qiimeyno.
“Waxaan dooneynaa inaan tababarkii ugu dambeyn ee maanta la gaarno, ka dibna go’aan ka gaarno haddii ay suurtagal tahay inuu ku soo bilowdo 11ka ama kursiga keydka.”
Serge Aurier (hamstring), Eric Dier iyo Harry Winks ayaa dhamaantood dhaawac ku maqan, sida weeraryahanka Harry Kane ka dib markii uu dhaawac ka soo gaaray canqowga lugta hore.
Tottenham waxay 1-0 ku hogaamineysaa Etihad Stadium ka dib markii uu goolka guusha u dhaliyey Son Heung-min lugta hore ee talaadada.
Spurs ayaa dooneysa inay gaarto semi-finalka Champions League markii ugu horeysay, lakiin Pochettino ayaa sheegay in City ay weli ugu cadcadahay inay ku guuleysato Champions League, inkastoo ay lugtii hore ku soo badisay.
“Manchester City aniga ahaan waa mid ka mid ah kooxaha ugu fiican adduunka, waana jecel yahay inaan ku guuleysto Premier League iyo Champions League,” ayuu yiri.
Kulanka wuxuu soo galayaa saacada Geeska Afrika marka ay tahay: 10:00 PM oo Caawa ah.
“Inaan garaacno lugtii hore waxa ay aheyd natiijo cajiib ah, laakiin si wacan ayaan u ogaaneynaa kulankaan inuu furan yahay, berrito ayaa noqon doonta mid aad u adag.
“Laakiin waxaan aaminsanahay in aan ku dagaalami doonno, berri waxa uu noqon doonaa caqabad fiican oo dagaal ah, waxaan aad u dhiirigalinayaa oo waan ku faraxsanahay.”
Tababaraha City Pep Guardiola ayaa ku adkeysanaya taageerayaasha Man City inay abuuraan jawi Arbacada la mid ah tan markii ay 2-1 ku garaaceen Liverpool horyaalka Janaayo.
“Runtii waan xiiseynayaa sida taageerayaasha ay u socdaan,” ayuu yiri.
“[Muuqaal ah sida] ciyaarta Liverpool ayaa igu filan aniga – waxoogaa ka sii wanaagsan, waxaan doonayaa inaan arko hadii ay [taageerayaasha] doonayaan inay gaaraan semi-finalka.
“Ku dadaal carruurta – 20kii bilood ee ugu dambeeyay, way ku faani karaan wixii ay qabteen, laakiin waa dad.
“Waxay ciyaari doonaan daqiiqado xun ciyaarta, waqtigaasna waxaan ubaahanahay taageerayaasheena, marxaladdaani, iyada oo aan taageerayaal ah, ma awoodno inaan sii marno, waxaan filayaa.”
Tottenham ayaa badisay kaliya hal kulan oo ka mid ah sideedii kulan ee ugu danbeysay ee ay booqdeen Manchester City tartamada oo dhan, hal guul darro 2-1 ah oo ay gaareen bishii February 2016.
Lugta koowaad ee Tottenham Hotspur v Manchester City ayaa sideed ciyaartoy oo Ingiriis ah ku soo bandhigtay line-upka labada line. Kulankii ugu dambeeyay ee Uefa Champions League ee lagu arko in badan oo Ingariis ah ayaa bilowday 2008 finalkii Champions League ee u dhaxeeyay Manchester United iyo Chelsea (10).
Kulanka lugtii hore:
Manchester City ayaa 0-1 lagu garaacday ka dib markii ay guul darreysatay kulankii Tottenham. 32kii kulan ee ugu dambeysay ee ay ka soo badisay lugta hore ee wareega group-yada Champions League oo ay 1-0 kaga soo badisay gurigeeda, 10 ayaa sii waday horumarkooda (31%).
Manchester City ayaa laga badiyay shantii kulan ee ugu dambeysay oo ay la ciyaartay kooxo Ingariis ah, oo ay ku jiraan seddexdii kulan ee Champions League.
Manchester City ayaa badisay 23 ka mid ah 25 kulan oo ay garoonkeeda ku ciyaartay tartamada oo dhan xilli ciyaareedkan (L2), inkastoo labadoodaba laga badiyay seddexdii kulan ee ugu danbeysay ee ay garoonkooda ku ciyaareen wareega isreebreebka Champions League, Man City oo 7-0 kaga soo badiyay Schalke xilli ciyaareedkan. .
Manchester City’s Leroy Sane ayaa si toos ah ugu biiray todobo gool seddexdii kulan ee ugu danbeysay ee ay ku ciyaareen Champions League, seddex gool, afar caawiye ayaa afar gool ka badan 7 kulan oo uu u ciyaaray Etihad (hal gool, labo caawiye) .
Sergio Aguero ayaa dhaliyay 10 gool todobadii kulan ee ugu horeysay ee uu ka horyimid Tottenham ee Manchester City tartamada oo dhan, laakiin tan iyo markii uu ku guuldareystay inuu shabaqa soo taabto mid kasta oo ka mid ah todobadii kulan ee ugu dambeysay ee ay wajahday; lugtii hore ee rigoorada ayaa ka maqan rigoorada.
Tottenham Hotspur ayaa laga reebay markii ugu danbeysay ee ay ku badiyaan 1-0 lugtii koowaad ee wareega group-yada ee Europa League, iyagoo garaacday Kaiserslautern wareegii labaad ee 1999-2000 oo Uefa Cup ah (labo gool oo isku celcelis ah) .
Tottenham ayaa badisay dhamaan seddexdii kulan ee ugu dambeysay Champions League; marnaba kuma guuleysan afar jeer oo isku xigta tartanka.
Mid kasta oo ka mid ah 10kii gool ee ugu dambeysay ee Tottenham uu dhaliyo Champions League ayaa yimid qeybtii labaad ee kulamadooda; Run ahaantii, 93% goolasha ay ka dhalisay tartankan xilli ciyaareedkan ayaa la dhaliyay qeybtii labaad (13/14).
‘Spurs waa iska yar yihiin’ – yaa horumaraya?
Simon Gleave, madaxa falanqaynta cayaaraha, Gracenote:
Tani waa kulanka ugu adag ee afarta kooxood ee Champions League.
Ka dib lugtii hore ee 1-0, Tottenham Hotspur ayaa haatan ugu cadcad inay hesho 52% fursada ah inay gaarto afartii kulan ee ugu danbeysay ee ay ku kulmeen Euro Club Index. Fursada Manchester City waa 48%.
City ayaa weli ah labada kooxood ee ugu guulaha badan Champions League (12%), laakiin fursada Tottenham waa 5%.
Qof kasta oo soo maraya waxaa laga yaabaa inuu ka tago labo ka mid ah shan kooxood ee ugu fiican Yurub si uu ugu guuleysto Champions League.
Haddii Manchester City ay la ciyaareyso FC Barcelona, Juventus iyo Liverpool, koox kasta oo ka hartay waa inay soo xirtaan labo ka mid ah shanda kooxood ee ugu fiican Yurub ee ku guuleysta Koobka 1da June.
Sawiro: Hoggaannada Ciidanka Xoogga Dalka oo isku shaandhayn lagu sameeyay